Cadaynta saxan aluminium dalool ah
Dhumucdiisuna waxay tahay saxan aluminium dalool derbiga daah waa 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm iyo 4.0mm. Cabbirka caadiga ah ee saxan aluminium dalool ah waa 1000 * 20001200 * 2400, kaas oo sidoo kale la habeyn karo.
Qiimaha cutubka gaarka ah ee saxan aluminium dalool ah ayaa loo baahan yahay in la go'aamiyo iyadoo loo eegayo dhumucda saxan aluminium dalool ah iyo dhibka habaynta. Guud ahaan, oraahda waxaa la sameeyaa ka dib markii macaamiishu ay bixiyaan dhumucda saxanka iyo cabbirka mesh si waafaqsan sawirka. Haddii saxanka farsamayntu ay adag tahay, khidmadda habayntu wax yar ayay ka badnaan doontaa.
Sifada saxan aluminium daloolsan
Dahaarka buufinta fluorocarbon ee saxanka aluminium ee daloolsan ee gidaarka daahku wuxuu leeyahay iska caabin cimilo oo aad u wanaagsan iyo iska caabin UV. Midabku waa mid aad u adkeysi leh oo xasilloon, ma fududa in la beddelo midabka, dhejinta wanaagsan, adkaanta sare, caabbinta saameyn xoog leh, daahan siman, caabbinta wasakhda xooggan iyo si sahlan loo nadiifiyo; Waa doorasho wanaagsan oo loogu talagalay alaabta qurxinta. Intaa waxaa dheer, saxanka aluminium ee dalool ee gidaarka daahyada ayaa sidoo kale leh saameyn wanaagsan oo soo jiidasho leh, ka hortagga dabka iyo rakibidda habboon.
Codsiga saxan aluminium dalool ah
Ma aha oo kaliya ku habboon qurxinta guriga, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xarumaha shirarka waaweyn iyo hoteelada.
Hore: Qurxinta qaab dhismeedka gudaha ee birta aan fiicnayn ee mesh silig togan
Xiga: Qurxinta muraayadda birta ah ee dahaadhay mesh silig qurxin ah